Kedụ ka ahịa azụmaahịa si jikọtara ya na mgbasa ozi ọdịnala | Martech Zone
Anaghị m emegide mgbasa ozi na ịkwụ ụgwọ maka nkwalite, mana ọtụtụ ndị nwere azụmaahịa na ọbụna ụfọdụ ndị ahịa anaghị amata ọdịiche dị. Ọtụtụ mgbe, a na-ahụ ahịa mmadụ dị ka onye ọzọ ọwa. Ọ bụ ezie na ọ bụ usoro ọzọ iji gbakwunye na ahịa gị, mmekọrịta mmadụ na ibe ya na-enye ohere dị iche iche.
Mgbasa mgbasa ozi na-akpaghasị mgbasa ozi mgbasa ozi kemgbe ọ malitere na ọnọdụ ahụ ma nye usoro nlele egwu nke ndị ahịa na-atụ anya ya. Site na oke UGC a na-ebipụta kwa ụbọchị, o doro anya na ịre ahịa mmadụ bụ ihe bara uru maka mgbasa ozi ezubere iche, ọgbọ na ụzọ njikọ abụọ. Brightkit, Otu esi eme ka uru bara uru na Social Marketing
Mgbasa ozi bụ n'ụzọ kachasị mkpa, ọ bụghị usoro mmekọrịta. Enweghị m ike ịza ozugbo na mgbasa ozi telivishọn ma ọ bụ redio… ma ọ bụ ọbụlagodi mgbasa ozi dijitalụ na ịntanetị. Mana enwere m ike ịzaghachi, ikwughachi ma ọ bụ zaghachi ahịa mmadụ. Mgbasa mgbasa ozi na-enye ụzọ kachasị dị irè ma dị irè iji nyere aka n'okwu ọnụ ahịa na akụkọ ntolite - ụlọ ọrụ gị kwesịrị ịpị ya. Ọzọkwa, mgbe ego mkpọsa gị akpọnwụwo, ya mere mgbasa ozi gị. Mana ọdịnaya nke akọrọ na soshal midia nwere ike ịdịruo ọtụtụ afọ.
Tags: nghọta ndị ahịanyiwe dijitalụemailFacebookmgbasa ozi googleinstagramnjikọ ahịaedu ọgbọahia ahiauka iruihe metụrụ yaPinterestAshareable ọdịnayaahịa mmadụasọmpi azụmaahịa mmekọrịta mmadụ na ibe yammekọrịta mmadụ na ibe yaezubere iche mgbasa oziomenala mgbasa oziTwitternjikọ aka abụọọdịnaya anyandu ndu warmzurẹlu